“Habar Awal u tanaasul”si berri ka maalin adigana markaaga laguugu tanaasulo,” Cali-guray | Berberanews.com
Home WARARKA “Habar Awal u tanaasul”si berri ka maalin adigana markaaga laguugu tanaasulo,” Cali-guray
“Habar Awal u tanaasul”si berri ka maalin adigana markaaga laguugu tanaasulo,” Cali-guray
Hargeysa(Aftahannews):- Guddoomiye Ku-xigeenkii saddexaad ee Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Cali Maxamed Yuusuf (Cali-Guray) oo Garabka Jamaal Cali Xuseen ka tirsanaa, ayaa shalay ka muquurtay shir ay sara-joogga ku qabteen Garabka Jamaal, ka dib markii Xukuumaddu u diidday shir ay ku qabsan lahaayeen Huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa. Waxaanu ku dooday in Hadalkii ugu dambeeyey ee uu Jamaal ka helaa ahaa inuu tanaasulayo.
Cali-Gurey, ayaa sheegay in uu Jamaal Cali Xuseen uu u sheegay inuu tanaasulayo, isla markaana u tanaasulayo Musharraxa jagada Madaxweynaha Xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi.
Waxa uu Cali-Gurey hoosta ka xariiqey in ay Jamaal Maalintii Jimcihii inna dhaafay uu Gurigiisa ugu yimi, isla markaana u xaqiijiyay inuu ugu tanaasulayo Muuse Biixi si beelaysan. Qoraal uu Cali-Gurey arrimo badan oo Sirahaas kaga hadlayo oo uu ku baahiyay Bartiisa Faceebook Maanta, ayaa u dhignaa sidatan:-
“Anigu lama yaabani Muuse Biixi ee yaan waxba Carabka lagu badin. Meel buu ku socdaa sidii uu ku gaadhi karo amma uu is yadhaa waad ku gaadhi kartaa sax iyo qaladba wuu isku deyi karaa. Isaga oo Jamaal gadhka hayana goob joog baan u ahaa oo dhawr todobaad ayaa loo kala dab qaadayay in kasta oo goor dambe aan ogaaday qofka i soo ogaysiiyay een ka aqbalay kuna raacay Ilaahay xaqqa jecele aanu Muuse ahayn ee Jamaal Cali Xuseen ahaa oo aniga ay xagiisa igaga timi Jamaalna uu si buuxda u aqbalay inu tanaasulo.
Sidiina aanu kula kulanay markii ugu horeysay Muuse Biixi subaxnimadii uu waftiga Madaxwaynaha Addis Ababa u raacayay keligayona maanu ahayn ee dad kale ayaa goobjoog ahaa. Maalintii ugu horaysay ee Jamaal uu tanaasulkiisa ii xaqiijinayay lafteeda gurigayga ayuu iigu yimi keligiina muu ahayn markhati bay iyaduna lahayd. Isla Jimcihii ugu dambeeyay ayuu hadana isaga oo keligii ah guriga iigu yimi manuu igu odhan wax baa is bedelay ee wuxu ii xaqiijiyay inu tanaasulayo.
Anigu sidii uu maalintii ugu horraysay igu yidhi ku shaqee ayaan kula shaqeeyay markaan qofkan tuuga ah ee beenaalaha ah ee khaayinka ah ee bilaa damiirka ah ee bilaa dadnimada ah ee bilaa waxadka ah ee bilaa diinta ah noociisa arkayayna Jamaal arrinka uu isagu iila yimi waan ku raacay waayo? Xal baan u arkayay ee miyaan qaldanaa mise waan khiyaameeyay mise hiilkii aan la Barbar joogay ayaan kaga baxay.
Hadal afka Jamaal ka soo baxa waxa aniga iigu dambeeyay WAAN TANAASULAYAA oo Muuse ayaan u tanaasulayaa. Jawaabtii aan siiyay waxay ahayd ha u tanaasulin Muuse ee “Habar Awal u tanaasul”si berri ka maalin adigana markaaga laguugu tanaasulo, khasaarihii qofkan waalani ku gaadhsiiyayna tacwiid uga hesho. Dibna umaanu kulmin ilaa hadda.
Markaa Jamaal dad baa helay kale oo go’aankiisii bedelay waxa uu ku qancay oon ahayn in kan gudaafadda ahi dhulka jiid jiido oy u tareena anigu ma garanayo. Lakiin Sirxan ku bedbaadi maayo xumaan tiisa waana godob taala oo ma duugoobayso ee cid waliba ha ogaato. Muuse Biixi haduu hoosta soo gashado uu iiga dhigo geedi isaga u hiiliyay isaga leh waaye anigu kulama jiro gidobtaana waan daba joogayaa halkii ay doonto iyo intii ay doonto ha igu qaadato maalin maalmaha ka mid ah somebody will pay.” sidaa ayuu Cali-Guray ku yidhi Qoraalka uu ku baahiyey Bartiisa Facebook.
Previous articleWaa maxay Sababta Buluuga looga dhigo Astaanta Shirkadaha Xidhiidhka Bulshada (Social media)
Next article“Dhibka UCID haystaa waa libin uu Faysal ka haysto xukuumadda iyo Kulmiye” Xildh Siciid Cilmi